အဘယ်သို့ငါခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်? | USAHello ကနေသတင်းအချက်အလက် | USAHello
ဤစာမျက်နှာကိုနှင့် USA တွင်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားဖို့ဘယ်လိုအဘယ်အရာကိုခိုလှုံခွင့်နှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ရှိပါတယ်.
အရေးကြီးအသိပေးစာ: အမေရိကန်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်နှင့်အသငျသညျကိုအမေရိကန်-မက္ကဆီကိုနယ်စပ်မှာနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားရန်အဘို့အဖြစ်နိုင်မဖြစ်စေခြင်းငှါ. ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံမှုအတွက်နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် Read.
သငျသညျလုံခြုံစွာသင့်အိမ်တိုင်းပြည်သို့ပြန်လာလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေဖြင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ဖြစ်ပါသည်. သူတို့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကြောင့်မှညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ကိုစိုးရိမ်ခံစားခဲ့ကြရသည်ဖြစ်သောကြောင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလူပေါင်းကာကွယ်မှုရှာကြံယူအက်စ်အေထံသို့လာ: လူမျိုး, ဘာသာ, အမျိုးသား, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်လူမှုရေးအုပ်စုတွင်အဖွဲ့ဝင်, သို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးအမြင်.
အမေရိကန်အုပ်ချုပ်ရေးကို USA တွင်ခိုလှုံခွင့်ရှာကြံမှလူကိုရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်. ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံစခန်းများတွင်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းရေးစင်တာများတွင်ကျင်းပလျက်ရှိသည်. ကလေးများဝေးသူတို့ရဲ့မိဘများထံမှခေါ်ဆောင်သွားပြီ. အမေရိကန်နယ်စပ်တလျှောက်တွင်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံမှုအတွက် updates များကို Read.
USA တွင်ခိုလှုံခွင့်ရနိုင်ဖို့အတွက်, သင်သက်သေပြနိုင်ဖို့သက်သေအထောက်အထားရှိပါကသင်သည်ညှဉ်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းကိုသို့မဟုတ်စော်ကားခဲ့ကြသည်သင်၏အမှုကိုကူညီပေးပါ, နှင့်သင့်အစိုးရသင်သည်ကာကွယ်ပေးမပြုခဲ့ကြောင်း. သင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နေထိုင်နိုင်စေဖို့သင့်ရဲ့နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ကိစ္စတွင်အနိုင်ရဖို့ရှိသည်ပိုကောင်းခွင့်အလမ်းရှိသည်ပိုမိုသက်သေအထောက်အထား. အစဉ်အမြဲအမှန်တရားပြောပြရန်သေချာပါစေ, မဟုတ်ရင်သင်ချက်ချင်းသင့်အမှုငြင်းပယ်နိုင်. သင်တို့သည်လည်းအသေးစိတ်အကြောင်းကိုအလွန်တိကျတဲ့ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်. ဖြစ်ပျက်အတိအကျဘာကိုသတိရအချိန်ဖြုန်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်, အတိအကျရက်စွဲပေါ်တွင်. သင်တစ်ဦးအမှားလုပ်လိုလျှင်, အစိုးရကသင်လဲလျောင်းနေကြသည်ထင်စေခြင်းငှါ.
အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ (i.e. သင့်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်, မွေးစာရင်း, ကျောင်းသားမှတ်ပုံတင်ကဒ်, အိမ်သူအိမ်သား registry ကို, အမျိုးသားရေးလက္ခဏာကဒ်, သို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့ဝင်ကဒ်)
သင်ဖန်တီးထားသောကြစေခြင်းငှါမဆိုမူကြမ်းခိုလှုံခွင့် applications များသို့မဟုတ်ကျမ်းကျိန်လွှာ
ကြှနျုပျတို့၏ website အပေါ်မှာပိုပြီးအရင်းအမြစ်တွေကို
လာမယ့်ဘာလုပ်ရမှန်းသေချာသင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု / မက္ကဆီကိုနယ်စပ်၏တစ်ဖက်အပေါ်ဖြစ်ကြပြီးမဟုတ်? သငျသညျအမိုးအကာရှာဖွေနေကြသည်, ဥပဒေရေးရာပံ့ပိုးမှု, အစာ, နှင့်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ဟုဆိုကာကူညီ? သငျသညျအောကျ Are 18? ဒီနေရာတွင်အခြေခံလိုအပ်ချက်များနှင့်အသင့်အမှုအတှကျအကွံဉာဏျနှင့်အတူများကိုကူညီရန်နိုင်မည်အကြောင်းအချို့အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည်.
သင်နယ်စပ်မှာ USA တွင်တစ်ဦးလူဝင်မှုအဖြစ်သင့်အခွင့်အရေးများကိုသိကူညီရန်အရင်းအမြစ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်.
သငျသညျအနီးအရင်းအမြစ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရှာတွေ့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံသယံဇာတရှာဖွေကိရိယာကိုသုံးပါ. ပထမဦးစွာသင်၏ဘာသာစကားရိုက်ထည့်ပါ. သို့ပြုလျှင်သင်၏မြို့ထဲသို့ဝင်. ထိုအခါရှေးခယျြ “resetttlement နှင့်ခိုလှုံခွင့်။”
ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ, ရှေ့နေတစ်ဦးခိုလှုံခွင့်အရာရှိကဖြစ်ဟန်ဆောင်နှင့်သာမန်အားဖြင့်အင်တာဗျူးစဉ်ကသငျသညျဖို့တောင်းလိမ့်မယ်လို့မေးခွန်းများကိုမေးတယ်. ဤသူသည်သင်တို့သူတို့သည်သင့်ကိုမေးပါလိမ့်မယ်မေးခွန်းများကိုမှသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဖြေကိုကွိုတငျပွငျဆငျကူညီပေးပါမည်.
ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထား - သင့်ကိစ္စတွင်အနိုင်ရ
ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ, သငျသညျသတိထားပြင်ဆင်မှုအားဖြင့်သင်တို့၏နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ကိစ္စတွင်အနိုင်ရနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုဟောင်းတဦးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်သဘာဝန်ဆောင်မှုရှေ့နေချုပ်တဲ့ Carl Shusterman ဆွေးနွေးပွဲ.
ဤရွေ့ကားလက်စွဲ U.S အောက်မှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတို့၏အခွင့်အရေးကိုတစ်ဦးနားလည်မှုပေးဖို့အခြေခံသတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်. လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတရားစွဲဆိုမှုစဉ်အတွင်းဒါမှမဟုတ်သူတို့အမိမြေလုံခြုံရေးဌာနတို့ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေကြမယ်ဆိုရင်ဥပဒ. ဤအလက်စွဲအတွက်သတင်းအချက်အလက်ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမဖြစ်သင့်, နှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူထိန်းသိမ်းခံနှင့်၎င်းတို့၏ချစ်ရသူအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြောင်းရွှေ့လာသောလူတရားမျှတရေးစင်တာမှအရည်အချင်းပြည့်ဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်သို့မဟုတ်အခြားယုံကြည်အဖွဲ့အစည်းကိုရှာအံ့သောငှါအားပေးခဲ့တယ်နေကြတယ်.
သင့်ရဲ့ဖယ်ရှားရေးသို့မဟုတ်ပြည်နှင်ဒဏ်အဘို့အထုတ်ပြန်ထားသောအမိန့်ရှိဖူးပြီဆိုရင်, သင်ဆဲနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားများအတွက်အခွင့်အလမ်းများ, သင်တစ်ဦးရှေ့နေရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ပင်.
ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံမှုအတွက် Options ကို - ဖယ်ရှားရေးတရားစွဲဆိုမှု၌ရှိကြ၏သို့သော်ရှေ့နေရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသူကလူများအတွက်
“ကျွန်မပြန်လှည့်သွားဝံ့ဘူး” - ခိုလှုံခွင့်ပေးဖို့လမ်းညွှန်, ဖယ်ရှားရေး၏အခွန်ရှောင်, နှင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုဆန့်ကျင်စည်းဝေးကြီး
Pro ကို Se ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံမှုအတွက်အရင်းအမြစ်များ - ဖယ်ရှားရေးတရားစွဲဆိုမှု၌နေသောသူတို့အဘို့
သင်၏အခငြ့်အရေး LGBTQ ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသိကြ သူတို့လိင်တူချစ်သူကြောင့်သူတို့ရဲ့နေအိမ်နိုင်ငံများသို့ပြန်သွားဖို့ကြောက်လန့်နေသောလူများအတွက်တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါသည်, လိင်တူချစ်သူ, ရိုးရိုးသို့မဟုတ်လိင် (လိင်တူချစ်သူ) နှင့် / သို့မဟုတ်မိမိတို့၏ HIV အခြေအနေကိုကြောင့်. သင်တို့သည်လည်းများတွင်စာရွက်စာတမ်းဖတ်ရှုနိုင်သည် စပိန်, ပြင်သစ် နှင့် အဘိဓါန် Arabic.
သင်သင့်အိမ်နိုင်ငံသို့ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးပါကသငျသညျထိခိုကျသို့မဟုတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရလိမျ့မညျကိုကွောကျရှံ့လျှင်သင်ပြည်နှင်ဒဏ်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ကာကွယ်ရေးရှိစေခြင်းငှါ. အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြောင်းရွှေ့လာသောလူ Justice Center ကိုဥပဒေရေးရာအကြံပေးများကိုဥပဒေရေးရာရည်ညွှန်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်. သငျသညျက၎င်း၏သေဆုံးသူအခမဲ့အရေအတွက်ကိုမှာအမျိုးသားပြောင်းရွှေ့လာသောလူ Justice Center ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်: (312) 263-0901.
ဒုက္ခသည်အဆင့်အတန်း / ယူအက်စ်အေနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထား: ကူညီဖြစ်စဉ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ
ယူအက်စ်အေ၏အပြင်ဘက်တွင်ဒုက္ခသည်အဖြစ် / ကနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထား
ဤစာမျက်နှာကိုလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်နိုင်ငံများရှိရရှိနိုင်အခမဲ့သို့မဟုတ်လျှော့ချစျေးနှုန်းဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုပြသ. သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုများအတွက် Check.
USCIS အပြောင်းအလဲ: နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားသူများအတွက်ဖြစ်စဉ်သစ် 2018 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ
ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံ - မက္ကစီကိုကနေမိသားစုများအတွက်သတင်းအချက်အလက်သစ်များ, ဗဟိုနှင့်တောင်အမေရိက
ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုထံမှလာ UNHCR က, USCIS နှင့်အခြားယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်. ဒါဟာလမ်းညွှန်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်သည်နှင့်အမျှမကြာခဏတတ်နိုင်သမျှမွမ်းမံ. USAHello ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး, မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်. သင်တစ်ဦးအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ အခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးနည်းဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေ.